HPMC N'ihi Wall putty, eji kuru uwe, Exterior Wall putty
Wall putty (eji kuru uwe) bụ ụdị nke ji achọ ihe na-eme ka mgbidi n'elu ezigbo, ọ ga-eji na mputa na n'ime ime mgbidi mma. Kimacell HPMC arụ dị oké mkpa ọrụ na mgbidi putty (eji kuru uwe) ka mma isi Njirimara dị ka mmiri njigide, na-emeghe oge, ịgbawa eguzogide, workability, wdg
Kimacell enye abụọ iche iche nke HPMC n'ihi na mgbidi putty (eji kuru uwe) iji melite Njirimara nke mmiri njigide, na-emeghe oge, mgbochi cack, workability, wdg
The gbanwetụrụ ọkwa HPMC 37100 na-akpan mepụtara maka ciment-dabere na ngwa, dị ka Single oyi akwa uwe, eji kuru uwe, ciment plaster.
The unmodified ọkwa HPMC MP100M bụ aku nhọrọ, nke nwekwara ike imeta izugbe chọrọ Njirimara nke mgbidi putty ma ọ bụ ewepụrụ abụba uwe.
Akụkụ nke Products
• Ezigbo na-arụ ọrụ n'elu
• Mfe mado
• Ọ dịghị nnyapade ka ngwá ọrụ
• Ọ dịghị burble ime
• Nnọọ Good mmiri njigide
• Ezi mgbochi shrinkage, mgbochi mgbape
More Ozi banyere HPMC Ngwaahịa:
1. Products nhazi ọkwa: unmodified ngwaahịa na elu ọgwụgwọ na ukwuu gbanwetụrụ ngwaahịa
2. viscosity nso: 50 ~ 80,000 mpa.s (Brookfiled RV) ma ọ bụ 50 ~ 300,000 mpa.s (NDJ / Brookfied LV)
3. Quality kwụsie ike: ana achi achi kasị kwụsie ike nke anyị na àgwà.
4. Unmodified ngwaahịa: Higher adị ọcha, mma arụmọrụ na ndị ọzọ mụ
5. Ukwuu gbanwetụrụ ngwaahịa: Dị technology awade mma Njirimara dị ka mmiri njigide, ileghara eguzogide, ịgbawa eguzogide, ogologo-emeghe oge, wdg ọtụtụ-eji Ngidi adhesives, Wall putty, ogbunigwe, Gypsum dabeere ngwaahịa, wdg
6. Products traceability: Anyị na-samples bụla ogbe Mba ngwaahịa maka 3 afọ soro ọ bụla mma nsogbu zụlitere ahịa.
7. R & D center: Anyị nwere a ụwa-klas R & D center iji hụ na kasị ọkachamara oru nkwado ahịa anyị.
Kima Chemical Co., Ltd bụ ihe magburu onwe soplaya nke hpmc maka Wall putty, tile nrapado, seramiiki tile nrapado, tile nyagide ngwa agha, ezi mmiri njigide, ogologo-emeghe oge, ileghara eguzogide, mma workability na China, bụ nke na-a ọkachamara emeputa na soplaya. Anyị factory e lekwasịrị anya na mmepụta nke elu àgwà cellulose ethers ngwaahịa nke ulo oru ọkwa na-ewu ọkwa ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ otú ahụ na ngwaahịa na amaghị ebe ịzụta, bịa kpọtụrụ anyị. Anyị ga-enye gị asọmpi price na ọkachamara ọrụ.
KIMA mgbe niile ịhụ na-enye ahịa: The Kasị Cost / Irè Ngwaahịa.
Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị na ngwaahịa, biko kpọtụrụ anyị na-enweghị oge.
Post oge: Nov-13-2018